Wararkii ugu dambeeyay qarax la doonayay in lagu dilo guddoomiye degmo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay qarax la doonayay in lagu dilo guddoomiye degmo
Wararkii ugu dambeeyay qarax la doonayay in lagu dilo guddoomiye degmo
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ka soo baxaya qarax miinada dhulka lagu aaso ah, kaasi oo ka dhacay agagaarka garoonka kubadda Cagta ee Eng. Yariisow ee Degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir.
Qaraxani ayaa jugtiisa ayaa waxaa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya, in qaraxaasi lala beegsaday gaari uu la socda guddoomiyaha degmada Yaaqshiid, Muuse Geeseey Jimcaale, isagoo xilligaasi ku sii socday garoonka oo ay ka socotay Ciyaar u dhaxeysay Kooxda Degmada Yaaqshiid iyo Koox kale.
Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ayaa ka badbaaday qaraxaasi la doonayay in lagu dilo.
Balse qaraxaasi waxaa ku geeriyooday, hal qof oo ahaa wade mooto bajaaj, halka laba kale oo shacab ah ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa durba loola cararay goobaha caafimaadka, si loola tacaallo dhaawacooda.
Weli wax war ah kama soo bixin maamulka degmada Yaaqshiid oo ku aadan qaraxii lagu dili lahaa guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geeseey Jimcaale, balse uu ka badbaaday.
Ciidamada booliska Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay halka uu qaraxa ka dhacay, ayaan la ogeyn inay dad u soo qabteen iyo in kale.
Qarax lagu dili rabay